किन सुनिन्छ खुट्टा, सुन्निए के गर्ने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य किन सुनिन्छ खुट्टा, सुन्निए के गर्ने ?
किन सुनिन्छ खुट्टा, सुन्निए के गर्ने ?
२०७४, २४ आश्विन मंगलवार १९:४५
खुट्टा सुन्निनु एउटा साधारण समस्या हो । यसको कारण अति सरलदेखि अत्यन्तै जटिलसम्म हुन सक्छ । त्यसैले खुट्टा सुन्निएको छ भने, तुरुन्तै कारणको बारेमा जाँच गर्नुपर्छ । खुट्टाको हड्डी वा गोलीगाँठो भन्दा माथि औंलाले थिच्दा सुन्निएको भए खाल्डो देखिन्छ । औलाको टुप्पाले ३० सेकेण्ड जति खुट्टामा थिच्दा सुन्निएको छ भने थाहा हुन्छ । सुन्निएको कारणले हातको औलामा औंठी लगाउन गा¥हो हुन सक्छ । जुत्ता लगाउँदा गा¥हो हुने, हिड्दा खुट्टा दुख्ने वा अप्ठ्यारो हुने आदिखुट्टा सुन्निएको कारणले हुन सक्छ ।
एउटा खुट्टा सुन्निए पछि के गर्ने
खुट्टा सुन्निएको कम गर्न पिसाब बढी लगाउने औषधी सम्बन्धित विशेषज्ञलाई नदेखाइ कहिल्यै खानु हुँदैन । यसले कमजोरी गराउँछ र अचानक मुटुको समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।
खुट्टा सुन्नियो भने कसलाई जँचाउने
खुट्टा सुन्निएमा तुरुन्तै आत्तिनु हँदैन खुट्टा मात्रै सुन्निनु र अरु केही लक्षण (जस्तै स्वाँस्वाँ, छाती दुख्नु, पेट पोल्नु, पिसाब कम हुनु) नहुनुलाई जटिल समस्याको रुपमा मानिदैन । तर, माथि लेखेको कुनै समस्या पनि खुट्टा सुन्निने सँगै छ भने तुरुन्त मेडिकल परामर्श लिनुपर्छ । यसमा धेरै जसो बिरामीको मुटुको परिक्षण गर्नुपर्ने भएकाले मुटुरोग विशेषज्ञलाई भेट्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । मृगौलाको कारणले पनि खुट्टा सुन्निने गर्दछ । प्रारम्भिक जाँचमै (पिसाब र मृगौलामा खराबी देखिएमा नेफ्रोलोजिष्ट (मृगौला रोग विशेषज्ञ) लाई भेट्नु जरुरी हुन्छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिका
Previous article विदामा बेलायतबाट आएका पुर्जाले म्याग्दी क्याम्पसलाई १ लाख ५० हजार सहयोग